Tselatra · Jolay, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Jolay, 2014
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Jolay, 2014
Ny Kooperacija (“Cooperation” na Fiaraha-miasa, teny Makedoniana entina hilazàna ny tranombarotra enta-madinika any amin'ireo tanàna kely), vondrom-panakanto tsy mampidi-bola fa mamelon-tena, dia nampiantrano fampirantiana nitondra ny lohateny hoe “Fotoam-piovàna: Ny Kanto ho Fanentanana Fanoherana ny Tsindrihazolena” [en, mk, misy sary] tany Skopje, vao tsy ela akory izay.
‘Ny tahotra no mampihodina ny tany’ hoy Ines Efremova. Sary avy amin'ny Kooperacija, nahazoana alalana.
Araka ny tatitra [mk] nataon'ny fanangonam-baovao maromaro mitatitra momba ny kolontsaina [mk], anisan'izany ny SEE Cult [sr] any Belgrade, nampiranty asa avy amina olon-tsotra sy vondrona mpanakanto malaza maro izany hetsika izany. Hita tamin'izy ireo ny asatanan'i Vitaly Komar, IRWIN, Santiago Sierra, DETEXT, ary koa ny an'ireo mpanakanto mavitrika indrindra avy amin'ny faritra, tahaka an-dry Nemanja Cvijanović, Ibro Hasanović, Igor Toševski, Kristina Gorovska & Jure Lavrin, Ines Efremova, Filip Jovanovski, O-P-A, sy ny sisa.
Nanoritsoritra izany fampirantiana izany tao amin'ny pejiny ny vondrom-panakanto nanatontosa azy:
Kooperacija dia tetikasa mikendry ny hetsika ara-kanto ivelan'ny sehatry ny asa, ka misarika fomba fijery vaovao amin'ny famoronana sy ny fanandramana ny kanton'ny vanim-potoana ankehitriny […]
Ny tetikady voalohany amin'izany dia fakàna ireo toerana malalaka manerana ny faritry ny tanàna, sy ny fampirantiana amin'ny alalana andianà hetsika tsy ampoizina. Ny vokatra kendrena amin'izany dia ny adihevitra mametra-panontaniana mitondra ho aminà fanorenana indray momba ireo toerana mampiahiahy anatin'ny kanto, ary ny famokarana tontolo hahafahan'ny fifanankalozan-kevitra, ny traikefa ary ny fahalalahana maneho hevitra hitsiry.
Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Candy
Mpanoratra Tanya Lokot Nandika avylavitra
Mpanao gazety roa avy ao amin'ny gazety mivoaka isanandro MADAGASCAR MATIN no nalefa any amin'ny fonjan'Antanimora. Androany maraina, voaantso tany amin'ny Brigadin'i Fiadanana izy ireo. Tsy iza akory ilay nametraka fitaraina fa ny Minisitra Rivo Rakotovao
Nizara ny “statut” an'i Solo Rajaonson i Tantely Rasoanaivo:
Vaovao farany: <Fahalalahan'ny fanaovan-gazety: ireo mpiara-miasa aminay, ny Talen'ny Famoahana ny gazety Madagascar Matin, Jean Luc Rahaga sy ny Tonian'ny fanoratana, Didier Ramanoelina dia nampidirana an-tranomaizina any Antanimora. Noho ny fitarainana momba ny fanalam-baraka ny Minisi-pirenena iray. Fiovàna sy fialàna amin'ny taloha hoy ianao?>
Però: Ny Fitiavana Dia… Fomba Vaovao Hanairana Ny Olon-tinao
Hanairany ny olon-tiany mandritra ny tsingerintaona nahaterahany, efa voaomany avokoa ny zavatra rehetra amin'ny fanomezana saribakoly vorodamba goavana, saingy nahatonga azy tsy maintsy handeha tongotra [es] maherin'ny efatra miles (fito kilometatra) nibata ilay fanomezana goavambe ny fitokonan'ny fitaovam-pitaterana.
Ity no tantara tsara fiafara an'i Jonatan Rosas, avy any amin'ny distrikan'i Yanacancha, any amin'ny tanàna Peroviana ao Pasco. Tsy nandalo dia lasa moramora io tranga io tao anatin'ny Twitter:
FITIAVANA VE IZANY? Nandeha tongotra 7 kilometatra (4m 61 yard) niaraka taminà saribakoly vorodamba goavana hataony fanomezana ho an'ny olon-tiany PERÚ.- Jonatan Rosas, izay miaina any…
Tsy maintsy nandeha tongotra nilanja ilay fanomezana mavesatra ho an'ny olon-tiany i Jonatan Rosas noho ny fitokonan'ny fitaovam-pitaterana…
Nanao dia sorona i Jonatan Rosas raha nilanja saribakoly vorodamba mirefy 1.60 m (5'2″) noho ny…
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, miora
15 Jolay 2014